နေအိမ်/စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ/ကူးစက်ခံရသောကွန်ပျူတာကို HitmanPro.Kickstart USB stick သုံး၍ စတင်ပါ
Vangelis9 ။ မေလ 2015
ကူးစက်ခံရသောကွန်ပျူတာကို HitmanPro.Kickstart USB stick သုံး၍ စတင်ပါ။ လူများစွာသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြပြီး၎င်းတို့အနက်အချို့သည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ ကွန်ပြူတာကကောင်းကောင်းမစနိုင်ရင်မင်းရဲ့ဒေတာတွေကိုလက်လှမ်းမမီရင်မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားစွာအံ့အားသင့်သွားတတ်တယ်။ ယနေ့လူသားမျိုးနွယ်အများစုသည်၎င်း၏အသက်မဟုတ်လျှင်၎င်း၏ဒေတာများကိုအွန်လိုင်းမှစီမံခန့်ခွဲသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုသည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်ထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကမ္ဘာဆုံးခါနီး၌သင်ခံစားရသည်။
အကယ်၍ သင့်ကွန်ပြူတာသည် ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ထရိုဂျန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုတစိုက်နှင့် သတိထားနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအကူအညီဖြင့် ပြဿနာကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင့်ကွန်ပြူတာကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် USB stick၊ သန့်ရှင်းသောကွန်ပျူတာနှင့် လိုအပ်ပါသည်။ HitmanPro.Kickstart နှင့် GVU Trojan ဖယ်ရှားရေး .
HitmanPro သည်ကွဲပြားခြားနားသောလုံခြုံရေးကိရိယာများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသောပြည့်စုံသော antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကူးစက်ခံရသောကွန်ပျူတာကို spyware, trojans, virus, malware တို့အတွက်စစ်ဆေးသည်။ စစ်ဆေးမှုပြီးစီးပါကတွေ့ရှိခဲ့သော malware အားလုံး၏အသေးစိတ်စာရင်းကိုသင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာမှမည်သည့်အရာများကိုဖယ်ရှားသင့်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
HitmanPro.Kickstart USB stick ကိုဖန်တီးပါ
ဤဆောင်းပါး၏လက်ကျန်တွင် Anti-Spyware Tool ကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြလိမ့်မည် HitmanPro.Kickstart အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် bootable USB stick တစ်ခုဖန်တီးပါ။ သင်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ USB ချောင်း ကွန်ပြူတာ သန့်တယ်။
HitmanPro ကို download လုပ်ပါ
HitmanPro.Kickstart ကိုစတင်ပါ။ (တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ)
Bruce Lee ကဲ့သို့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။
ယခင်ထည့်ထားသော USB stick ကိုရွေးပြီး "ကိုနှိပ်ပါ။Kickstart ကို install လုပ်ပါ။.
“ J” ဟုဖြေနိုင်သောလုံခြုံရေးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်a“ USB stick ပေါ်က data တွေအားလုံးပျက်သွားလို့အဖြေရမယ်။
HitmanPro.Kickstart စတင်ပြီး bootable USB stick ကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
ရောဂါပိုးရှိသောကွန်ပျူတာကို bootable HitmanPro.Kickstart USB stick ဖြင့်စတင်ပါ။
ယခင်ဖန်တီးထားသော bootable USB stick ကိုသင်၏ကူးစက်ခံရသောကွန်ပျူတာထဲသို့ထည့်ပါ။
ကွန်ပျူတာကို USB stick မှစတင်နိုင်ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် boot order ကိုပြောင်းပါ။
ကွန်ပျူတာကို USB stick မှစလိုက်သည်နှင့် HitmanPro.Kickstart start menu ပေါ်လာသည်။
ရွေးချယ်မှု- Master Boot Record (MBR) ၏ hard disk ကျော်သွားပါမည်။
ရွေးချယ်မှု - MBR တွင်ရှိသော hard drive ပေါ်တွင် boot loader (GRUB) ရှိလျှင်ဤရွေးပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်မဟုတ်လျှင်အစီအစဉ်သည်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်မှု ၁ နှင့်ဆက်သွားလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
Windows ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် Login ၀ င်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ဖြစ်ဖြစ်ချင်း HitmanPro.Kickstart စတင်ပါပြီ၊ နောက်ကိုနှိပ်ပါ။
anti-spyware tool သည်သင်၏ကူးစက်ခံရသောကွန်ပျူတာကိုစတင်စကင်ဖတ်လိမ့်မည်။
Websearch နှင့်အခြား malware များကိုဖယ်ရှားပါ
Vista ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်ပါ။ autostart program များကို msconfig ဖြင့်ပိတ်ပါ
ZeroCfgSvc MFC အပလီကေးရှင်းသည်ပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ပြီးပိတ်ရန်လိုအပ်သည်
Windows Vista တွင် Disk cleanup သည်ပိုမြန်လာသည်
Windows 8 ထည့်သွင်းနည်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းပြထားပါတယ်
Windows Vista ၌အလိုအလျောက်နာရီချိန်ညှိခြင်းကိုပိတ်ပါ
Windows 8.1 တွင်အလိုအလျောက် app အပ်ဒိတ်များကိုပိတ်ထားပါ